I-VILLORE-Ikhaya elimnandi kwiKhaya laseTuscany
I-VILLORE Home Sweet Home yayilikhaya lethu iminyaka de kwafuneka sifuduke njengoko usapho lwalusiya lukhula. Sisachitha ixesha lethu elininzi kunye nehlobo apho njengoko abantwana bethu abathathu bethanda ukuhlala apho. Yindawo yethu yentliziyo, ezele ziinkumbulo ezimnandi kunye nokuhleka okuninzi.
Indawo yethu yokuhlala ikwindawo eqhelekileyo yamatye, kwindawo entle yepanoramic enombono we-360 ° weenduli ezijikelezileyo kunye nezidiliya zaseChianti Classico kunye neenqaba zaseSan Gimignano ngasemva.
Indawo, engqongwe uhlaza, ozolileyo, ngogqibeleleyo ukuze lufunda Tuscany kunye Chianti ukuba Poggibonsi kunye yemoto kuhlangana kwimizuzu nje 5 ngemoto, Castellina in Chianti imizuzu eli-15, San Gimignano imizuzu engama-20, imizuzu Siena 25 Florence imizuzu 35.
Indlu, malunga ne-90 square metres, ibekwe kumgangatho ophantsi kwaye ijikelezwe yigadi enentendelezo phambi komnyango. Ukufikelela kukho izinyuko ezilishumi elinambini macala omabini njengoko igadi iphezu kwenduli. Ifenitshala yeyangoku ngelixa imiqadi eqhelekileyo isabonakala kwisilingi. Igumbi eliphambili ligumbi lethu lokuhlala eliqaqambileyo elinendawo yomlilo esebenzayo, ilungele iimvakwemini ezipholileyo. Kwigumbi lokuhlala sinombhede we-sofa kabini kunye nesifuba se-drawers, kodwa kunye ne-55 "i-flat screen TV. Ukusuka kwi-corridor unokufikelela zombini intendelezo kunye nomyezo ngeefestile ezimbini zaseFransi, okwenza yonke into iphelele ehlobo xa kunandipha kwizikhewu ingaphakathi the kudla-in ekhitshini lixhotyiswe 28-intshi flat-screen TV, njengesicocisi, eziko, microwave, iifriji isikhenkcezisi, ngetoaster / pfumerile, Nespresso umatshini ikofu, iziqhubekisi ukutya encinane (a blender, a pimer , a homogenizer kuba nabantwana) kunye nempahla kunye nezitya (iiseti amacwecwe-6 no-12, iiglasi namacephe). kule ndawo zokulala esinayo okulala amabini, elinye kabini kunye window, 28 '' flat screen TV, ngubo kunye zezihlangu yokubeka Ecaleni kwegumbi lokuhlambela eline-whirlpool tub.Elona gumbi likhulu lelabantwana bethu, linegumbi lokuhlambela eline-en-suite elineshawa enkulu eyenziwe ngamatye.Kugumbi lokulala, elinefestile kunye nefestile yesiFrentshi, sinesibini kunye neebhedi, enye yazo ingaba kabini. Igumbi libanzi kakhulu kwaye xa siceliwe singongeza ibhedi. Kwigumbi lokulala kukho i-wardrobe, isifuba sedrowa, idesksi kunye ne-TV ye-flat screen ye-28-intshi.
I-WIFI ifumaneka kuyo yonke indlu.
Iindwendwe zethu nazo ziya kufumana izixhobo zokucoca (i-vacuum cleaner, imitshayelo, iibrashi), intsimbi kunye nebhodi yoku-ayina kunye ne-BBQ.
Ngaphandle kukho amagunjana amabini amancinci asetyenziswa njengeshedi yesixhobo kunye negumbi lebhoyila elinokufikelela ukusuka egadini, kwenye yezi uya kufumana umatshini wokuhlamba waseBosh kunye nesinki. Kuyenzeka ukupaka iimoto ezimbini kwisikwere se-condominium ngaphakathi kwendawo ebiyelwe ngesango lombane.
Sibonelela ngamashiti, iiduvethi, imiqamelo, iitawuli, amalaphu etafile, iphepha langasese kunye nesepha yesandla.
IVillore yindawo ezolileyo kwaye yokuphumla.
Abamelwane bahle ngenene kwaye khumbulani ukuwuhlonipha lo moya.
Sidla ngokuthanda ukuthatha uhambo kwiindlela ezikufutshane kunye nokukhwela ibhayisekile ukuya eCastellina eChianti.
Uvela ePoggibonsi kunye nohola wendlela, udlula kwiziko lezemidlalo likamasipala elibonelela ngamachibi okuqubha, amabala ebhola ekhatywayo, ibhola yevoli kunye nebasketball, ngelixa iindlela zokubaleka kunye nokuhamba ziyafumaneka ecaleni komlambo iStaggia.
Ukuba ufuna ukwenza ukungcamla iwayini, kukho iindawo zewayini kwindawo ekufutshane neVillore.
Ukufikelela kwindlu kuya kuba ngekhowudi eya kufakwa kwiphedi yamanani. Ikhowudi iya kuthunyelwa kuwe kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba ungene kunye nemiyalelo. Izitshixo zendlu kunye ne-automatic gate zisendlini kwaye siyakucela ukuba uzishiye xa zihamba. Xa sikwindawo siya kukuvuyela ngakumbi ukukwamkela ngokobuqu!
Ukufikelela kwindlu kuya kuba ngekhowudi eya kufakwa kwiphedi yamanani. Ikhowudi iya kuthunyelwa kuwe kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba ungene kunye nemiyalelo. Izitshixo zendl…